Imbonakalo Yediski Le ndawo ime kuyo yokudibanisa desktop yenzelwe ukunxibelelana nabantu ngamaphupha emihla. Imingxunya ihlelwe kwaye idibene yongezwa ngeentyatyambo, iilollipops, okanye izifundo ezizisebenzisayo kwipatheni yazo ukusuka kulwakhiwo olwahlukeneyo. Umphezulu oguqulweyo ubonakalisa kwaye utshintsha iitoni kwizifundo ezibonisiweyo kwaye abantu banxibelelana nazo.
Imaski Olu luyilo luphefumlelwe yizwi elincinci. Umyili uyonyula uBilly noJulie zimbini iintlobo zobuntu ezininzi. Izinto ezintsonkothileyo zenziwe ngohlengahlengiso lwe parametric lwee-oriental of the ladometri-jometry, esekwe kumngxunya obambeke ngokudibeneyo. Njengonxibelelwano kunye notoliko, le maski yenzelwe ukwenza abantu ukuba bahlolisise isazela sakho.
Umncedisi Olu luyilo luhlola imizobo ye-eyelash. Umyili uyigqala i-eyelashing kukwenza ulindelo lwakho. Wenza i-eyelash yokuma njenge icon yobomi okanye inqanaba elincinci lokusebenza. Oku kuma kufanekisela ukuzibophelela okukhumbuzayo ekuseni okanye ngaphambi kokulala, ngokumisela iileyile okwethutyana ngaphambi okanye emva kokufakwa. Ukuma kwe-eyelash yindlela yokucengceleza into engenamsebenzi efake isandla kulonwabo lwakho lwemihla ngemihla.
Ukufakwa Komxholo Olu luyilo lunxibelelana nesihloko esibonisiweyo kwiimodyuli. Lo mxholo wokuma uyile ngendlela eyilelweyo yokuhlanganisa amakhonkco amathandathu okanye nangaphezulu kwiyunithi enesikali esikwiindlela ezintathu ezihambelanayo. Ukucwangciswa kwefom yasimahla kunye notches kwenza unxibelelwano lufane nabantu abadibeneyo. Ukucwangciswa kwemingxunya emincinci kwakha ulwakhiwo lwendawo yokuhlala yesifundo enamacala ahambelanayo.
Ukukhanya Kwetafile Oku kukhanya kudlala indima ebonakalayo yokuhamba nabantu kwindawo yokusebenza ukusuka ekuseni ukuya ebusuku. Yenzelwe nabantu abasebenza kwindawo yengqondo. Isicingo sinokuxhuma kwikhompyuter yelaptop okanye ibhanki yamandla. Ubume benyanga benziwa ngeekota ezintathu zesangqa njengomfanekiso ophakanyayo ovela kumfanekiso wethambeka elenziwe ngesakhelo esingenanto. Ipateni yenyanga ikhumbuza isikhokelo sokufika kwiprojekthi yesithuba. Isimo sikhangeleka njengesikrweqe kwimini yemini kunye nesixhobo esikhanyayo esithuthuzela ixesha lomsebenzi ebusuku.
Ukukhanya Isibane seLouvre sisibane esisebenzayo setafile esiphefumlelwe lilanga lasehlobo laseGrikhi elidlula ngokulula ukusuka kwizitshixo ezivalekileyo ngokusebenzisa iLouvres. Inamacici angama-20, ii-6 ze-cork kunye ne-14 yePlexiglas, etshintsha ucwangco ngendlela edlalayo ukuze kuguqulwe ukuvela, ubungakanani kunye nobuhle bokugqibela bokukhanya ngokokuthanda kunye neemfuno zabasebenzisi. Ukukhanya kudlula kwinto leyo kwaye kubangela ukungafani, kungabikho zithunzi zibonakalayo ngokwawo okanye kumphezulu ojikeleze wona. Iiringi ezinobude obahlukeneyo zinika ithuba lokudibana okungapheliyo, ukwenziwa ngokwezifiso okukhuselekileyo kunye nolawulo lokukhanya olupheleleyo.
Calendar 2014 “Botanical Life” Ikhalenda Tuesday 5 July
Calendar 2014 “Farm” Ikhalenda Monday 4 July
Calendar 2014 “Town” Kwikhalenda Sunday 3 July
Imbonakalo Yediski Imaski Umncedisi Ukufakwa Komxholo Ukukhanya Kwetafile Ukukhanya